प्रत्येक राज्य मा, विशेष हावा आक्रमण विरुद्ध सुरक्षाका लागि प्रदान गरिएको छ विरोधी विमान मिसाइल प्रणाली (Sams)। मा 18 जुलाई 1958, अनुसार को CPSU केन्द्रीय समिति को संकल्प संग, इन्सट्रूमेंटेशन को अनुसन्धान संस्थान मा सुरु डिजाइन काम सैम "घन"। एयर रक्षा मिसाइल सिस्टम मध्यम र कम उचाईमा शत्रु लक्ष्य जलाएर जमीन सेना र हावा आक्रमण बाट Armored डिभिजनका रक्षा गर्न डिजाइन।
सैम सोभियत संघ के हो?
"घन" - विरोधी विमान मिसाइल प्रणाली, को संरचना जो लडाई हालतमा शामिल:
Antiaircraft निर्देशित मिसाइल 3M9।
आत्म-चालित प्रदर्शन अन्वेषण र निर्देशन (1S91)।
आत्म-चालित लन्चर 2P25 स्थापना।
जसले सोभियत संघ मा सैम सिर्जना समावेश छ?
विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन" मा समावेश छन् भनेर सबै लडाई उपकरण, व्यक्तिगत रूपमा डिजाइन। प्रत्येक साइट को लागि एक मुख्य डिजाइनर, प्रबन्धक परिणाम लागि जिम्मेवार खटाइयो। 1S91 आत्म-चालित बन्दूक एए Rastova को नेतृत्व अन्तर्गत सिर्जना गरिएको थियो। अर्ध-सक्रिय राडार टाउको 2P25, प्रदर्शन homing मिसाइलहरु, 1960 मुख्य डिजाइनर यू Vekhov सम्म विकसित भएको थियो। यो काम आफ्नो उत्तराधिकारी 1960 मा पुलिस महानिरीक्षक Akopyan थियो। सम्पूर्ण विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन" को लागि जिम्मेवार र यो OKB-15 वी वी Tihomirov को मुख्य डिजाइनर भयो।
डिजाइन र कार्य सुरुवात
आत्म-चालित लन्चर मिसाइलहरु लागि निर्देशन समावेश जो विशेष वाहनो मा जीएम-578 को चेसिस, मा राखिएको थियो। 2P25 बिजुली actuators, नेविगेशन उपकरण समावेश गर्यो। साथै, आत्म-चालित बन्दूक गणनाको उपकरणहरू, टोपोग्राफिक स्थानमा स्वायत्त ग्याँस-कल बिजुली बोट र उपकरण, सङ्केतन जानकारी संचार र prestart स्थापना नियन्त्रणमा संग सुसज्जित थियो। दुई सकेट को रकेट लन्चर संग डकिंग लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले एक रकेट मा राखिएको थियो। प्रक्रिया यसको prelaunch निर्देशन डाटा 1S91 गर्ने जो ड्राइव वाहनो प्रयोग गरेर प्रदर्शन। Radiotelekodovaya लिंक 2P25 आवश्यक जानकारी प्रदान। कम्ब्याट स्थापना गणना तीन थियो। 2P25 वजन 19.5 टन पुगेको छ।
विरोधी विमान मिसाइल जटिल "घन" 3M9 अनुसार योजना "रोटरी पखेटा" संग निर्माण एक मिसाइल संग सुसज्जित। यसको समकक्ष देखि 3M8 थप नियन्त्रण सतहहरु उपस्थिति द्वारा विशेषता छ। रोटरी विंग डिजाइनर प्रयोग आफ्नो आकार कारण कम छन्। यसबाहेक, servos एक उच्च शक्ति आवश्यक छैन। यो हाइड्रोलिक ड्राइव हल्का हावा द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ।
सुरु र डपलर आवृत्ति यसको समर्थन संग लक्ष्य अधिग्रहण एक संयुक्त प्रणोदन प्रणाली शामिल semiactive राडार homing टाउको 1SB4, एक मिसाइल अगाडि स्थित, प्रदर्शन। वजन उहाँले खण्डीकरणको क्रमलाई Warhead 57 किलो थियो। Avtodiodny दोहरी fuze यसको धडाका को कार्यान्वयन लागि आदेश दिए। 33 सेमी जो स्थिरिकारी कन्सोल तह सिर्जना थिए संकलित मिसाइल विशेष कन्टेनर मा ओसारपसार, -। रकेट आकार 5.8 मिटर, व्यास थियो।
कसरी पोस्ट-दहन रकेट कोठामा?
यसको दहन पछि ग्याँस को शुल्क ईंन्धन को अन्तिम दहन प्रदर्शन थियो जसमा afterburning कोठामा मा हावा inlets मार्फत प्रवेश गर्छ। ठोस इन्धन शुल्क नै 29 सेन्टीमिटरको 172-पाउन्ड बम व्यास र 1.7 मिटर एक लम्बाइ थियो। यसको निर्माण लागि प्रयोग बैलिस्टिक इन्धन। एयर intakes सुपरसोनिक काम अवस्था गणना थिए। यस रकेट लन्च समयमा सबै हावा वेंट कस फाइबर सिसा प्लग द्वारा बन्द गरिएको छ। रकेट प्रक्षेपण सुरुवात बूस्टर सहित अघि लन्च साइट मा गरिएको थियो।
सुरु5सेकेन्ड लामो थियो। फिर्ता फायर पछि 5-6 सेकेन्ड झंझरी, को फाइबर सिसा धारण जो रकेट चुच्चो, को भित्री भाग र चरण अग्रिम सञ्चालन midcourse।
यो संरचना र कार्य 1S91
आत्म-चालित अन्वेषण र निर्देशन हुन्छन्:
जो पत्ता लगाउने र ट्रयाकिङ संग राडार राडार स्टेशन हवाई लक्ष्य गरिन्छ।
रोशनी 1S31। यो उपकरणको मद्दतले लक्ष्य पहिचान, नेभिगेशन, टोपोग्राफिक स्थान, सारा सिस्टम "घन" संग radiotelekodovaya जडान गरे। विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम (तल तस्विरमा) दुई राडार एन्टेना घुमाउँदा संग पूरा भएको थियो: 1S11 र 1S31।
तिनीहरूले 15 RPM मा एक परिपत्र समीक्षा प्रदर्शन। को एंटेना वाहक आवृत्तियों अन्तरालमा थिए। दुई-तरिका रेडियो च्यानलहरू फोकल विमान को एक बिन्दु छ प्रबन्ध, radiators संग सुसज्जित थिए। , पत्ता लगाउन पहिचान र हवाई लक्ष्य 70 000 300 को एक दूरी र 30 7,000 गर्न मीटर को एक उचाइ हुन सक्छन् साथ दिनु।
1S91 आत्म-चालित बन्दूक को जीएम-568 को चेसिस मा स्थित थियो। वजन धन 20.3 टन थियो। चालक दल व्यवस्थापन चार मान्छे शामिल थिए।
1959 मा, विरोधी-विमान मिसाइल सिस्टम "घन" आफ्नो पहिलो परीक्षण पारित गरेको छ। निम्न कमजोरी पहिचान गरिएको छ यो काम को परिणाम स्वरूप:
एयर intakes असफल डिजाइन थिए।
afterburning कोठामा गरिब थर्मल बाधा कोटिंग थियो। यो shortcoming कारण टाइटेनियम क्यामेरा को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई थियो। यो धातु परीक्षण पछि इस्पात बदलिएको थियो।
1961 मा, मुख्य डिजाइनर, "क्युबा" को विकास मा लगे, बदलिएको छ। यद्यपि, यो विरोधी मिसाइल सिस्टम सुधार गर्न काम को प्रवेग असर गरेन। 1961 देखि 83 1963 मिसाइलहरु शुरू गरियो। यी को, केवल तीन सुरूवात सफल। 1964 मा Warhead समावेश पहिलो रकेट जारी थियो। उहाँले मध्यम उचाईमा उडान, आईएल-28 द्वारा मारा थियो। अगाडी को शुरूआत सफल थिए। फलस्वरूप, 1967 मा, पार्टी केन्द्रीय समिति सेना को काखमा विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन" अपनाउने निर्णय गरे। यसलाई निर्यात लागि एक मोडेल सिर्जना गर्न परियोजना शुरू।
को 2K12 को संस्करण निर्यात "घन"
एयर रक्षा मिसाइल प्रणाली, जसको विशेषताहरु यसको आधार एनालग फरक, 1971 मा भेला भएको थियो। मतभेद हावा लक्ष्य को खोज प्रदर्शन कि प्रणाली प्रभावित।
विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन" ( "वर्ग" - निर्यात को लागि अभिप्रेरित बिरुवाहरु को नाम) हस्तक्षेप विरुद्ध सुरक्षा को स्तर परिवर्तन, राज्य सहायक को उद्देश्य बीच यो सम्भव भेद गर्न गरेर हासिल गरिएको छ। निर्यात मोडेल उष्ण कटिबन्धीय प्रयोगको लागि उपयुक्त थियो।
विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन-M1"
1973 मा आधुनिकीकरण मा काम निम्न, सोभियत सेना साथ सशस्त्र एक सुधारिएको संस्करण देखा - "। घन-M1" सैम गरे डिजाइन सुधार लक्ष्य क्षेत्रको सीमा विस्तार गरेको छ, हस्तक्षेप को विभिन्न प्रकारका को homing टाउको उन्नति सुरक्षा, सुरु अवधि5सेकेन्ड भन्दा बढी छैन। यस राडार को एन्टेना विरोधी राडार मिसाइलहरु को प्रभाव बाट सुरक्षा प्रदान गरेका थिए।
सैम कहाँ प्रयोग गर्ने?
1967 देखि 1982 को लागि, पहिलो विरोधी विमान मिसाइल सिस्टम "घन" व्यापक जहाँ त्यहाँ सक्रिय शत्रुता थिए विभिन्न देशहरुमा निर्यात गरिएको छ। बिना अरब-Israeli युद्ध मा हावा रक्षा प्रणाली को सहायता इस्राएलका वायु सेना नष्ट भएको थियो छैन। 1999 मा, नाटो सेना को विस्फोट रोक्न क्रममा सक्रिय यो जटिल युगोस्लाभिया प्रयोग। यो बेफाइदा सैम आफ्नो टेलिभिजन च्यानलहरू रात काम गर्न छाँटकाँट छैन को त्रुटिपूर्ण मानिन्छ। दिन को यो समय मा ज्यादातर नाटो द्वारा एक झटका व्यवहार गर्नुभयो।
यस मामला मा, "क्युबा" को काम अप्रभावी थियो। रात हावा हडताल सम्झँदै युगोस्लाभिया को सेना तीन Sams गुमाए।
आज सैम "घन" स्लोवाकिया लागू हुन्छ। सैम आत्म-चालित लन्चर र तीन मिसाइलहरु comprises। यो संशोधन सबैभन्दा उन्नत मानिन्छ, र सारा जटिल श्रृंखला मा "घन-M2" को रूपमा चिनिन्छ।
रूस, बेलारुस, काजकस्तान मा hepatitis सी संग सेना लिन नगर्नुहोस्,
सर्जन्ट: जेठोपन, जिम्मेवारी, पदोन्नति र demotion
सबैभन्दा शक्तिशाली वायवीय बन्दूक के हो?
Carb "Solex" - यो स्थापित छ र कसरी नियमन?
स्पेन राम्रो तटों। सेतो तटों। स्पेन - सेतो बालुवा समुद्र तट